Baarlamaanka oo meel mariyay sharciga ilaalinta xuquuqda carruurta – Radio Muqdisho
Baarlamaanka oo meel mariyay sharciga ilaalinta xuquuqda carruurta
Mudaneyaasha Barlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey heshiiska carruurta oo uu aqbalay Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo dhanka kale mudaneyaal ka tirsan barlamaanka ay Mooshin ka dhan ah Xeer Ilaaliyaha Qaranka u gudbiyeen guddoonka.
Kalfadhiga shanaad kulankiisa 16-aad ee Baarlamaanka Federaalka ah oo uu shir guddoominayay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaana kulanka horyaalay labo ajande oo kala ah Akhrinta iyo ansixinta heshiiska carruurta oo uu aqbalay Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay 20-kii November sanadkii 1989-kii iyo Akhrinta labaad Hindise sharciyeedka dhismaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka.
Siihayaha Wasiirka Wasaaradda Haweenka Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo sharcigan u gudbisay baarlamaanka, isla markaana kulanka ka hor akhrisay marxaladihii uu soo maray ayaa ka codsatay in ay ansixiyaan.
Dood dheer kaddib mudaneyaasha baarlamaanku waxa ay meel mariyeen shaciga ilaalinta Xuquuqda Carruurta, waxaana 140 mudane ay haa ogolaatay, halka mudane ka tirsan baarlamaanka uu ka aamusay, mana jirn cid diiday, sidaasina uu ku meel maray.
Intaas kaddib waxa ay mudanayashu gudaha galeen in ay talooyin ka dhiibtaan Hindise sharciyeedka dhismaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka ah, iyadoo ay jiraan Xildhibaanno soo jeediyay in la joojiyo hirgelinta Nidaamka Federaalka oo ay ku tilmaameen in uu yahay mid wax u dhimaya aayaha Soomaaliya.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii kulanka ka sheegay mooshin ay xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ka soo gudbiyeen oo su’aalo lagu weydiinayo xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka iyo Hanti dhowraha.
Dowladda oo lagu amaanay meel marinta qorshe howleedka Qaran ee la dagaallanka xadgudubka "War-saxaafadeed"